[Twitter|Photo] CNBLUE Arena Tour 2012 – Day 8 (Saitama Super Arena) | CNBLUESTORM
[Twitter|Photo] CNBLUE Arena Tour 2012 – Day 8 (Saitama Super Arena) Posted on October 20, 2012
【CNBLUE】 『CNBLUE Arena Tour 2012～COME ON !!!～』さいたま公演1日目、大盛況の後終了しました、応援してくださった皆様、ありがとうございました。明日いよいよファイナル！応援宜しくお願いします！
Translated by BOICE cnbluefanfun
Tagged: Arena Tour, CNBLUE, saitama
← [News] PD of ‘My Daughter Seoyoung’ reveals his thoughts on Jungshin’s acting and singing ability
[Twitter|Photo] CNBLUE Arena Tour 2012 – Final Day (Saitama Super Arena) →
8 Responses “[Twitter|Photo] CNBLUE Arena Tour 2012 – Day 8 (Saitama Super Arena)” → minitacmc
There is no need to ask for support, your Boice will surely support you.
Day 8 – can´t wait
to see more of CNBLUE
Kyaw Ko Ko Zaw
အင်္ဂလိပ်လိုရေးရတာပြောချင်တာကိုထိထိမိမိမပြောတတ်လို့ မြန်မာလိုရေးပြီး comment ပေးလိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ အစ်ကို Yong Hwa က တော်တော်ကို အသားပွလာသလားလို့။ တော်ရုံသင့်ရုံ လောက်ပဲ အားကစားလုပ်စေချင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အရင်ကလို ကြိုးစားတဲ့ရုပ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ပေါ့တီးပေါ့ဆ ပျော်ပျော်နေတယ်ရုပ်ဖြစ်နေပြီ။ အာရှသားမို့လို့လားတော့မသိဘူး ကျွန်တော့်အမြင်မှာကော့ cn blue က ၀ လာသလားလို့
မြန်မာပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာလိုရေးပြလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်က အခုချိန်မှာဆယ်တန်းမို့လို့ သိပ်ပြီးအားမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် music video များများထွက်စေချင်ပါတယ်။ လိုက်ပြီး like မလုပ်နိုင်တော့ပေမဲ့ download percent မြင့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Instead of producing your muscle, we hope you to produce more MVs, more world tour, more anticipation in more events.Tough you all show off your muscle, we suggest you to balance your weight. Are you all still now 62 kg?
why are you so concerned about their muscles? They are paying attention to their work also?
waa, they all don’t really look tired in this photo..
they look happy.. love it..
jungshiniee, show us your muscle too, minhyuk showed his too, haha..
i know you have some muscle jungshinieee.. hehe..
Web Statistics	16,584,747 hits